Zlatan Ibrahimovic oo heshiiska Man United dartiis u lumin doona Lacag dhan £4MILLION Sabab? | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Zlatan Ibrahimovic oo heshiiska Man United dartiis u lumin doona Lacag dhan £4MILLION Sabab?
Zlatan Ibrahimovic oo heshiiska Man United dartiis u lumin doona Lacag dhan £4MILLION Sabab?
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 5-06-16 7:22 AM Weeraryahanka Xulka qaranka Sweden ee Zlatan Ibrahimovic ayaa lasheegayaa in uu Goordhow heshiis Rasmi ah u Saxiixi Kooxda dalka England ee Manchester United Waxaana hadii uu Saxiixo uu lumin doonaa Lacag dhan £4MILLION.
Zlatan Ibrahimovic ayaa lasheegay in ka hor koobka yurub uu u duuli doono dalka England sida uu Cadeeyey Macalinka dalka Sweden Erik Hamren kaas oo yiri waxaan Maalin fasax ah siin doonaa Zlatan Ibrahimovic si uu Safar ugu tago dalka England una soo Saxiixo heshiiska Man United.
Wakiilka Zlatan Ibrahimovic Mino Raiola, ayaase Cadeeyey in hadii ka hor June 30 keeda ay koox kale heshiis u Saxiixaan ay ka lumi doondo £3.9m Lacagtaas oo ka soo geli lahayd Naadiga PSG balse Weeraryaahnka dalka Sweden ayaa waxaa uga Muhiimsan lacagtaas heshiiska Manchester United.